कोरोनाले भगवान् पनि क्वारेन्टाइनमा ! – Karnalikhabar
कोरोनाले भगवान् पनि क्वारेन्टाइनमा !
राजधानी काठमाडौं मन्दिरै–मन्दिरको शहर पनि हो । यहाँ टोल–टोलमा मन्दिर देख्न पाइन्छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको खतरा बढेर देश नै ‘लक–डाउन’ भएका बेला मठमन्दिर सुनसान छन् । ‘लक–डाउन’ले भक्तजनहरू मन्दिर आउन छाडेपछि मठ–मन्दिरका भगवान् पनि क्वारेन्टाइनमा बसेजस्तै भएका छन् ।
उपत्यकाका मन्दिरका ढोकामा ताला लगाइएको देखिन्छ, मन्दिरका प्राङ्गण उराठलाग्दा देखिएका छन् । सरकारले धार्मिक र सार्वजनिक स्थलमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन आग्रह गरेको दिनदेखि नै मठमन्दिरमा चहलपहल घटेको हो । ‘लक–डाउन’ घोषणा गरेपछि ३ दिनयता मठमन्दिरमा नियमित पूजा गर्न आउने पुजारी समेत देखिएका छैनन् ।
हिन्दू मान्यता अनुसार कलात्मक मूर्ति तयार गरेर प्राणप्रतिष्ठा गरिसकेपछि त्यसमा ‘ईश्वरीय शक्ति’ भएको मानिन्छ । दर्शनार्थी र भक्तजनले भरिने मठमन्दिर लकडाउनपछि सुनसान देखिन्छन् ।
अत्यावश्यक कामबाहेक यतिबेला सबै काठमाडौंबासी आ–¬आफ्नो घरमा बसिरहेका छन्, बाहिर निस्केका छैनन् । मन्दिरमा पूजापाठ गर्दा हुने भीडभाडले समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने भएका कारण मठमन्दिर बन्द गरिएका छन् ।
अघिल्लो - कोरोनाभाइरस: नेपालमा फसेका ब्रिटिश नागरिकहरूद्वारा घर फर्काउन सहयोग गर्न अनुरोध
ग्यास अभाव कम गर्न सिलिन्डरमा आधा मात्रै भरेर बेच्ने निर्णय - पछिल्लो